Nagu saabsan - VTEX GROUP
Goynta & Laabista
Dahaarka Nylon Taffeta
Kala jeexan Polyester Satin
-Xidhkii Edge Satin
Suufka & Cudurka Poly
Waxyaabaha kulul ee dhalaalay
Waxyaabaha koollada leh
Wax / cusbi
Sugnaansho - Aaminaad - Guul Wada Jir
Waan taaganahay, waxaan nahay saaxiib wanaagsan macaamiisheenna, malaha waad na garanaysaan oo keliya, laakiin waad ogaan kartaan dhawaan, inaan daacad u nahay dhammaan macaamiisha waxaanan noqon doonnaa saaxiib wanaagsan xitaa annagu ganacsi ma lihin. sidaan ognahay kalsoonidu waa talaabada ugu horeysa ee ganacsiga.
Waan aamin nahay, hadaad horay noo taqaanay, waad garan kartaa nooca dadka aan nahay. waxaan ku jirnaa warshadaha daabacaadda calaamadda in ka badan 15 sano. dhammaan macaamiisheennii hore xiriir wanaagsan bay nala leeyihiin oo way nala taageerayaan. runtii waanu ku faraxsanahay waanan ku qanacsanahay iyaga. Farxad.
Win-Win Wada jir
Win-win Wadajir waa himiladeenna ugu dambeysa, marka hore, dhammaan wax soo saarka ka imanaya soo saaraha aan lahayn nin dhexdhexaad ah, annaguna waxaan nahay milkiilaha soo saarahaas, waxaan ku taageeri karnaa macaamiisheenna qiimo wanaagsan, tayo deggan iyo adeeg aad u wanaagsan. waxaan nahay borofisar duurkayaga ah.
Waxaa laga yaabaa inaad sifiican noo garatay kahor. waxaan nahay koox, la yiraahdo: STW
S = Sam Wong: Maamulaha Agaasimaha Shanghai Flexo Inks Fine Chemical Chemical,, Ltd., 15 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan calaamadda dharka iyo daabacaadda berkadaha.
T = Tina Xia: Maamulaha Agaasimaha Shanghai AC TTR ribbons Co., Ltd., 15 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan calaamadda calaamadda iyo xargaha xargaha TTR.
W = Wayne Zhou: Maamulaha Agaasimaha Shanghai Xinhu Makiinado Co., Ltd. 15 sano oo ka shaqeynayay daabacaadda aagga mashiinada.
Ninka istaaga, wuxuu kaa caawin karaa xalalka buuxa ee mashruuca daabacaadda calaamadda. Wac markasta oo aad xor tahay.
Marwo Aaminaad ah, Waxay si fiican u taqaannaa calaamadaha alaabada dharka, alaabada ttr ribbons, waxayna kuu sheegi doontaa wax kasta oo ay ogtahay.
Win-win wada jir Man, Isagu had iyo jeer wuxuu isku dayaa inuu soo bandhigo qiimayaal wanaagsan, sidoo kale Isagaa kaa caawin kara arrimaha daabacaadda kasta.
KOOXDA VTEX - XALKA SOO SAARKA LABEL
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020-2030: VTEX GROUP Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.